Tuesday May 17, 2022 - 15:29:04
Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska Oil Price ( OOYL BREES) ee kasoo baxa dalka Maraykanka ayuu kaga hadlay saameynta uu dagaalka Ruushka ee Ukraine ku yeeshey dhaqaalaha caalamka gaar ahaan kan qaaradda Africa.
Dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa darbo culus ku dhuftay dhaqaalaha caalamka, dowlaha Africa ee dhaca koonfurta Saxaraha ayaana noqday kuwa ugu badan ee la tacaalaya saameynta xaga dhaqaalaha ah.
Sicirka shidaalka ayaa kor u kacay Arbacadii lasoo dhaafay, sida warbixintu tilmaameyso, kadib markii Yurub ay cunaqabateynno horleh kusoo rogtay dowladda Ruushka oo dagaal saddex bilood jirsadya kaga jirta dalka Ukraine.
Sida warbixintu sheegeyso cunaqabateynta dhaqaale ee qaaradda Yurub kusoo rogtay Ruushka waxay dhalisay sicir barar ballaaran oo lamid ah kii todobaatameeyadii ku dhuftay Yurub, qaaradda Africa ayana noqoneysa tan ugu badan ee la tacaaleysa dhibaatada la xiriirta dagaalka Ukraine iyo cunaqabateynta lagu soo rogay Ruushka.
Qoraaga warbixinta ayaa tilmaamaya in Yurub ay la gudboontahay iney raadsato badiil ay kaga maarmi karto shidaalka Ruushka, qaaradda Africa ayayan warbixintu tilmaameysaa iney tahay qaarad dihan, oo aan aad looga faa’ideysan kheyraadka dabiiciga ah ee dhex ceegaaga.
Saameynta ugu badan ee qaaradda Africa laga dareemayo, marka laga hadlayo dagaalka Ruushka ee Ukraine, waa sarakac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo maciishadda quutul daruuriga ah, qamadiga iyo waxyaabaha lamidka ah ayaana badankood waxaa laga soo saaraa wadamada Ruushka iyo Ukraine.
Sida ku cad warbixin kasoo baxday sanduuqa lacagta adduunka, 40% dhaqaalaha qaaradda Africa waxa uu ku baxaa soo iibshada cunnada daruuriga ah, maadaama qaaradda inteeda badan ay ku tiirsantahay cuntada laga soo waarido dalalka dibadda ah, sidii loo rabayna aan looga faa’ideysan wax soo saarka gudaha, oo aan lahayn badqab cunto oo la isku halleyn karo.
85% lacagta lagu bixiyo cuntada ee Africa, waxaa lagu soo iibiyaa qamadiga, kaasoo cirka isku shareerey sababo ku aadan iyadoo badankii laga keeno beeraha ku yaala Ruushka iyo Ukraine, oo ah labada dal ee hadda fooda iskula jira.
Marka laga soo tago qamadiga, maadooyinka loo adeegasado baciriminta beeraha waxaa inta badan laga soo saaraa wadamada Ruushka iyo Bila Rusiya, kuwaasoo hadda cunqabateynno adag wajahaya, sidaasi darteed dhaqaaalaha dowladaha soo koraya ee Africa ayaa culeesyo wajahi doona, taasoo keeneysa in la waayo badqab cunto.
Sanduuqa lacagta ee Adduunka ayaa sheegay in qiima kororka ku yimid shidaalka uu keenayo inuu kordho lacagta ku baxda badeeco dhoofinta iyo wixii lamid ah, taas bedelkeedana qiimaha cuntada uu qaali noqon doono, taas bedelkeedana kororkaas ay ka faa’ideysan doonaan keliya dowladaha sideeda ah ee dhoofiya shidaalka.
Madaxa Tamarta iyo horumarka ee machad ku yaala magaalada Parlin ayaa Yurub wuxuu usoo jeediyay iney afka saaraan Africa, halkaas oo uu sheegay in laga heleyo kheyraad dihan oo aan sidii la rabay looga faa’ideysan, si Yurub uga badbaado culeeska kusoo furmey, markii ay cunqabateyn saartey Ruushka.
Xukuumadda Parlin ayaa hadda billowday iney kordhiso awoodda tubooyinka shidaalka kasoo qaada Spain ee soo gaarsiiya Faransiska, kuwaasoo ka yimaada Aljeeriya oo kamid ah wadamada qaaradda Africa.
" Yurub waxaa waajib ah ku ah iney ka qeyb qaadato sidii looga faa’ideysan lahaa ceelasha shidaalka ee Liibiya iyo Aljeeriya, Sinigaal iyo Nayjeeriyana waxaa laga helaa saddex meelood hal meel gaaska laga helo Africa” ayuu yiri khabiir la hadlay wargeyska warbixintan daabacay.
Dowladaha Africa gaar ahaan Nayjeeriya ayaa u xamaasad qaba iney shidaalka u dhoofiyaan wadamada Yurub, taasoo ay u arkaan fursada ay ku heli karaan dhaqaale horleh, sidaasi darteed dowladaha Jarmalka iyo kuwa kale oo dhaca Yurub ayaa hadda ku howlan arima la xiriira arinkaas.
Khubarada ka faallooda arimaha badqabka cuntada ayaa soo jeedinaya in bulshooyinka ay ku dadaalaan iney soo saartaan waxyaabaha ay quutaan ee daruuriga ah, si looga maarmo ku xirnaanta dalalka Shisheeyaha iyo iney saameyn kugu yeelato loolaannada iyo siyaasadaha is diidan ee ka jira caalamka.
Soomaaliya oo ah dal uu Allaah ku manneystay kheyraad ballaaran, dhul beereedyo wanaagsan leh ayaa kamid ah wadamada sida aan wanaagsaneyn ugu tiirsan cuntooyinka laga keeno dibadda, taasoo hadda sarekac ballaaran laga dareemayo, ayna suuragal tahay iney sii kororto, maadaama xiisadda Ruushka ee Ukraine ay weli cirka isku sii shareereyso.
Hormuudka bulshada ayaa usoo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed iney xooga saaraan tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha, labadaas oo ah il dhaqaale iyo Masdar nololeed, oo ay bulshada Soomaaliyeeda kaga maarmi karto ku xirnaanta dibadaha iyo dalalka Shisheeyaha.